Romeo က Juliet ကိုဘာကြောင့်လျစ်လျူရှုတာလဲ။ (၂၀၁၀) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
အဘယ်ကြောင့် Romeo Juliet လျစ်လျူရှုနေပါသလား? (2010)
“ ဂျပန်လူမျိုးလူငယ်များသည်လိင်အရဆက်ဆံခြင်းကိုလျစ်လျူရှုခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ခြင်းများရှိလာပြီးအိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများကပင်လိင်မှုကိစ္စနည်းလာသည်။ The Wall Street ဂျာနယ်တစ် 2010 စစ်တမ်းကို ကိုးကား. ။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်လျှင်မြန်စွာမြင့်တက်နေသည်။ 36 မှ 16 အသက်ယောက်ျားထက်ပို 19% 17.5 ကနေပိုပြီးနှစ်ဆထက် 2008%, လိင်မစိတ်ဝင်စားမှုရှိသည်။
20 နှင့် 24 အကြားယောက်ျား% 11.8 မှ 21.5% ကနေခုန်နေချိန်တွင် 45 နှင့် 49 အကြားလူတို့,% 8.7 မှ 22.1% ကနေခုန်, အလားတူလမ်းကြောင်းသစ်ပြသခဲ့သည်။
ဂျပန်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ပြင်သစ်တွင် ၂၀၀၈ စစ်တမ်းတစ်ခုကတွေ့ရှိခဲ့သည် အသက်အရွယ်နုပျိုသောပြင်သစ်ယောက်ျား၏ 20 ရာခိုင်နှုန်းကို လိင်စိတ်ဝင်စားမှုအဘယ်သူမျှမရှိခဲ့သည်။ အမေရိကန်လူတို့သညျသတင်းပို့ကြသည် မလိုချင်တဲ့အပြောင်းအလဲများလွန်း။ ထိုအကြည့်ရှု အီတလီသားများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရငြီးငွေ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းခံရ.
ဂျပန်စစ်တမ်း၏ဒါရိုက်တာက“ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များသည်အခြားသူများနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အထူးသဖြင့်မလွယ်ကူကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ဒီအထွေထွေဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်းဟာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကြားမှာဖြစ်နေတယ်။ ” အမျိုးသမီးများသည်လိင်မှုကိစ္စကိုအကြီးအကျယ်မပြုလုပ်ခဲ့ကြသော်လည်းစိတ်မ ၀ င်စားဘဲလိင်ဆက်ဆံရန်ဆန္ဒမရှိသောအသက်အရွယ်မရွေးဂျူးလီယက်စ်သည်လည်းတိုးပွားလာခဲ့သည်။
ဘာဖြစ်နေတာလဲ? ထို့အပြင်အစဉ်အလာအားဖြင့်“ ထိုသို့ပြုရန်” စိတ်ထက်သန်မှုအရှိဆုံးလူငယ်များသည်အချိုးအစားမမျှတမှုကိုအဘယ်ကြောင့်ထိခိုက်သနည်း လွန်ခဲ့သော ၁၈ နှစ်ကဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့သူတစ် ဦး က“ ကမ္ဘာပေါ်မှာဂျပန်ယောက်ျားလေးတွေဟာလိင်ကိစ္စကိုစိတ်မဝင်စားကြဘူး။ မည်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်မဆိုအထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းသောဂျပန်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောနိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ သတင်းပို့သည် အခြားလေ့လာသူ“ ဂျပန်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေအများကြီးရှိတယ်။ စင်စစ်အားဖြင့်အာရှနှင့်ဥရောပရှိမည်သည့်နိုင်ငံများထက်မဆိုအလွန်များပြားသောပမာဏဖြစ်သည်။ ”
ဒီတော့ပြဿနာကိုလူပျိုတို့အော်ဂဇင်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်ရှိမရှိမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုမှုကိုသူတို့ပြသထားတယ်။ အဆိုပါကိစ္စဖြစ်ပါသည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတိုက်ရိုက်လက်တွဲဖော်တွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ဘာကြောင့်မစိတ်ဝင်စားကြတာလဲ။ ထင်ရှားတဲ့, porn ရှည်လျားကာလက်ခံလိုက်ပါသည်ကိုသတိပြုပါ ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဒါကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်မတင်နိုင်ဘူး။
ဤကိန်းဂဏန်းများသည်အင်တာနက်နှင့်ယနေ့အလွန်ထူးကဲသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ကစားစရာများမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည့်စိတ်အားထက်သန်မှုတိုးများလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား။ (အဆင့်မြင့်နည်းပညာ) ဂျပန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-devices များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ် Fleshlight Dollar Tree မှာရနိုင်မယ့်အရာနဲ့တူ။ )
လိင်စိတ်နိုးထမှု၏အာရုံခံစားမှုနောက်ဆုံးမှာပေါ်ပေါက် နားအကြားမဟုတျဘဲခြေထောက်။ လှုံ့ဆော်မှုများ Extreme ဆက်ဆက်တစ်အခန်းကဏ္ဍသော်လည်း, arousal ၏ဒီဂရီပမာဏနှင့်အကျိုးကို circuitry အဖြစ်လူသိများသည်ဦးနှောက်၏စရိုက်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြန့်ချိစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် neurochemicals မှ sensitivity ကိုကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခြေစိုက်စခန်းမှာလိင်စိတ်နိုးထကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် endogenous neurochemicals ကမီးလောင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့သြဇာအရှိဆုံးကသဘာဝအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။
လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု (နှင့်မိတ်လိုက်ခြင်း) ၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသောသဘာဝအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အာရုံကြောဓာတုသည် dopamine ဖြစ်သည်။ Dopamine ကကျွန်ုပ်တို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ မက်ဆေ့ခ်ျဖြင့်တိုက်နယ်ကိုဆုချပါ -“ ငါသာဆက်သွားရင်တကယ်ကောင်းတဲ့အရာကထောင့်မှန်မှာပဲ။ ” ဦး နှောက်အတွင်းရှိဤဆုလာဘ်တိုက်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်လီဗာကိုအသာပုတ်။ ကြွက်များကြိုးတပ်သည့်အခါသူတို့ဘာမျှမလုပ်ခဲ့ကြပါ။ ချွေးတွေမပေါက်ဘဲကျန်နေတဲ့ကလေးတွေကိုလျစ်လျူရှုတယ်၊နှင့်လက်ခံအမျိုးသမီး.
Dopamine သည်ကိုကင်း၏အလုအယက်နောက်ကွယ်တွင်လည်းရှိသည်။ ကိုကင်းသည် dopamine ပြန်လည်ထိတွေ့မှုကိုတားဆီးသဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချက်ပြမှုများကို ဦး နှောက်ထဲသို့ ဦး နှောက်ထဲ၌ထည့်သွင်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်သည်ကိုကင်းကိုလောင်းကစားခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ hentai, cam2cam လိင်, သို့မဟုတ်ဤ circuitry အပိုင်စီးတခြားအစားထိုးနိုင်စွမ်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်, အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ကလေးတွေနှင့်အတူအောင်မြင်စွာကျွန်တော်တို့ကိုကပ်လျက်တည်ရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့စျြခွငျးမတ်ေတာ / တပ်မက်သောစိတ်ကျတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကစာသားအိမ်ထောင်ဖက်-အနည်းဆုံးအချိန်များအတွက်အပေါ်ချိတ်ဆက်ရ။
နှောင်ကြိုးတွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအပေါ်လုံးဝမှီခိုဖြစ်ပါသည် dopamine ၏ပေါက်ကွဲမှုများ ငါတို့ချစ် goosing (ဆုလာဘ်) ဆားကစ်။ သေး ထုတ်လုပ်မှုကိုအစပျိုးပေးသောအရာဘာမှမရှိပါကဤယန္တရားသည်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းသာအလုပ်လုပ်သည် နောက်ထပ် dopamine ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏ရည်ရွယ်ထားသောပစ်မှတ်များ (အမျိုးအနွယ်၊ အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်ကလေးများ) ထက်ဖြစ်သည်။
Alas, ဒီနေ့၏ဖန်တီးမှု, hyperstimulation သည်ငါတို့ဘိုးဘေးများကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှအရာအားလုံးထက်ပိုအစွမ်းထက်သော dopamine ခရီးစဉ်များကိုအစပျိုးစေသည်။ အသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုတည်းက dopamine ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်သောကြောင့်ယနေ့အင်တာနက်သုံးစွဲသူသည်အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုအမြဲတမ်းနှိပ်ခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်းသည့်အချက်ကယနေ့ porn ၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်များထက်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
အင်တာနက်အသုံးပြုသူငယ်ရွယ်လေ၊ သူသည်ယနေ့လွတ်လပ်စွာထုတ်လွှင့်သော၊ အစဉ်အမြဲဝတ္ထုအသစ်များနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ကိရိယာများကို supranormal နှိုးဆွခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ငယ်ရွယ်သောယောက်ျားအစစ်အမှန်အိမ်ထောင်ဖက်မှလစျြလြူရှုနှုန်းပိုမိုမြင့်မားပြသသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အန္တရာယ်မှာ Pair ကိုခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Romeos (နှင့်အချို့သော Juliets) များသည်အလွန်ထူးကဲသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူများမှတစ်ဆင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ထားသည့် dopamine ကိုအလွန်မြင့်မားစွာရနိုင်မလား၊ ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်မှုများလွန်းခြင်းကြောင့်နို့တိုက်သတ္တ ၀ ါများစုံတွဲတွဲချိတ်ဆက်မှုယန္တရားကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည်ဟုယူဆရသည့်အသံသည်ထူးခြားသည်။ အမေရိကန်လိင်ကုထုံးဆရာ Wendy Maltz က -
သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ထူးဆန်းမှုနှင့်အတူ porn သည်အစစ်အမှန်ဘဝမိတ်ဖက်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နေပြီးအချို့ဖောက်သည်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများအတွက်အရေးအကြီးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒါအလွန်ထူးဆန်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသိပ္ပံပညာရှင်များသည်တွဲဖက်ထားသောတိရိစ္ဆာန်များ၏ ဦး နှောက်တွင်ဓာတုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (အမ်ဖီတမင်း) ကို အသုံးပြု၍ dopamine ကိုထုလုပ်သည့်အခါသဘာဝ monogamous တိရိစ္ဆာန်များ မရှိတော့တဦးတည်းအဖော်များအတွက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအတုဆွရုံပုံမှန်အစည်းအဝေး (ကရာ) နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်ရေရှည်တည်တံ့ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အဘို့အဦးနှောက်ဆားကစ်ပျက်ကွက်နေသောကဲ့သို့သူတို့ကိုငါစွန့်ခွာ, သူတို့ရဲ့ dopamine-မှီခို Bond စက်ယန္တရားပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီတိရစ္ဆာန် (voles) နှောင်ကြိုးလုံလုံခြုံခြုံနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အရေးယူရှာနေပေါ်လာတဲ့သူ-ပါလိမ့်မယ်နေအိမ်ဖျက်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းမှခြင်းကိုမနှစ်သက်ခံစားရသည်။ သုတေသီများ hyperstimulation တစ်နည်းနည်းနဲ့ရှင်းရှင်း pair တစုံ-နှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေး forestalling, ချက်ချင်းအကာအကွယ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကန်ကြောင်းတွေးဆ။
သုတေသနကိုလည်း supranormal ဆွလူသားတွေအတွက်တစ်စုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အားနည်းနေကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ တစ်ဦး၏အဆိုအရ 2007 လေ့လာချက်, မြောက်မြားစွာ sexy အမျိုးသမီးရုပ်တုမျှသာထိတွေ့တစ်ဦးသောသူသည်မိမိကို real-ဘဝလက်တွဲဖော်တနျဘိုးလြော့စေရန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူကဆွဲဆောင်မှုအပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်းနွေးထွေးမှုနှင့်ထောက်လှမ်းရေးအပေါ်သာအနိမ့်သူမ၏ rates ။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်း၏ဒါ့အပြင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပြီးနောက်ဘာသာရပ်များ ဒီထက်စိတ်ကျေနပ်မှုသတင်းပို့ မိတ်ဖက်၏ချစ်ခင်မှု၊ အသွင်အပြင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းလိုစိတ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပါအ ၀ င်သူတို့၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်များနှင့်အတူ။ ဒါ့အပြင်အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ၀ င်မှုမရှိဘဲလိင်ကိုပိုမိုအရေးပါလာအောင်လုပ်ကြတယ်။
ဒီနေ့အလွန်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောလိင်အထောက်အကူပြုမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်လိုက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုပြုသင့်သလော။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကမ္ဘာဂြိုဟ်ရဲ့တကယ်လူစည်ကား။
ပထမဦးစွာအလွန်အကျွံဆွအမှန်တကယ်အားဖြင့်ပျော်မွေ့ဘို့ငါတို့စွမ်းရည်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်ကိုရေတွက်ခြင်း။ ဤသည် dopamine dysregulation ကိုအရှိန်အဖြစ်ခွန်အားတိုးပွါး, ဒါကြောင့်ထွက်စွဲ, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, ယားယံခြင်း, အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများ၏အန္တရာယ်လှုံ့ဆော်မှု-တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်များအတွက်မကျေနပ်ရှာပုံတော်ဆီသို့ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။ စတန်းဖို့ဒ်ဇီဝဗေဒပညာရှင်ရောဘတ် Sapolsky ရှင်းပြအဖြစ် အဘယ့်ကြောင့် Zebra သည်အစာအိမ်နာမဖြစ်နိုင်သနည်း: "သဘာဝမဟုတ်သောပြင်းထန်သောဒြပ်အတွေ့အကြုံ၊ ခံစားမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုပေါက်ကွဲခြင်းများသည်သဘာဝအားဖြင့်ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းအဆင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်အပျက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်မွတ်သိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။ "
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်၊ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်အမျိုးသားများက erectile disfunction ကိုသတင်းပို့နေကြတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဆိပ်များ၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အစားအစာညံ့ဖျင်းမှုတို့သည်တရားခံများဖြစ်သည်ဟုဆိုသော်လည်း၎င်းတို့သည်လျစ်လျူရှုထားခြင်းခံရသည် အခန်းထဲမှာဆင်။ ဒီဆလိုက်တင်ဆက်မှုအတွက်ကရှင်းပြသည်အဖြစ်လွန်းဆွ (dopamine), ကျန်းမာစိုက်ထူများအတွက်အရေးပါသောအအလွန် dopamine receptors အချို့အတွက်လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ် Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့် Porn.
စကားမစပ်, Juliet လည်းသူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန် numbing ခံရဖို့ပုံရသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုမကြာသေးမီက posted:
ကျွန်ုပ်သည်ကောလိပ်တွင်တုန်ခါမှုကိုစတင်သုံးစွဲခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ခေတ်သစ်လိင်စွမ်းရည်ပြည့်ဝသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုထင်ကာ၎င်းသည်၎င်းအလုပ်ကိုမည်မျှထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းမယုံကြည်နိုင်ခဲ့ပါ။ တစ်လအတွင်းမှာကျွန်မရဲ့ရည်းစားနဲ့အော်ဂဇင်မဖြစ်တော့ဘူး၊ ပြီးတော့လအနည်းငယ်အကြာမှာငါလက်နဲ့တောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ vibrator သည်အမှိုက်ပုံးထဲရောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏တုန့်ပြန်မှုသည်ပြန်ပေါ်လာသည်။
တတိယအချက်ကမျိုးနွယ်စု၊ စုံတွဲအဆက်အစပ်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာရင်းနှီးမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အဖော်တွေနဲ့နွေးထွေးတဲ့ချစ်ခင်မှုတို့ကထုတ်လုပ်တဲ့ ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒကိုရှင်သန်နိုင်ဖို့ကြိုးကြိုးတပ်ထားတယ်။ လိင်ကစားစရာများနှင့်ညစ်ညမ်းသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတို့သည်ထိုအာရုံကြောဓာတုအကျိုးကျေးဇူးများကိုမပေးနိုင်ပါ။
Freud မှတင်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးဘဝ၏အဓိကအချက်များသာမကအပြန်အလှန်မှီခိုမှုမှကျွန်ုပ်တို့အကျိုးရရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည် cortisol ကိုလျှော့ချပေးပြီး၎င်းသည်ဖိစီးမှုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်အားနည်းသွားစေနိုင်သည်။ “ ကျွန်ုပ်တို့မှာစည်းကမ်းချက်တွေကူညီပေးမယ့်သူတစ်ယောက်ယောက်ရှိရင်ဒီကိစ္စဟာ ၀ မ်းနည်းစရာမကောင်းဘူး” ဟုရှင်းပြသည် စိတ်ပညာရှင် / အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် James A. Coan.
ကွန်နက်ရှင်ကနေအကျိုးအမြတ်အလွန်မှန်ကန်အသုံးအနှုန်းများပေါ်လာမှာ။ ဥပမာအားဖြင့်, စုံတွဲများအကြားနေ့စဉ်နွေးထိတွေ့ခြင်းဖြင့်ယောက်ျားအကျိုး သွေးဖိအားလျှော့ချ။ တစ်ဖက်နှင့်အတူ HIV ပိုးလူနာ အသက်ပိုရှည် နည်းလျှင်မြန်စွာအေအိုင်ဒီအက်စ်ဖွံ့ဖြိုး။ ဒဏ်ရာများနှစ်ကြိမ်အဖြစ်အစာရှောင်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ အဖော်နှင့်အတူအထီးကျန်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်။ သို့သျောလညျးကိုအနီးကပ်ချိတ်ဆက်မှုအများဆုံးလေးနက်တဲ့လက်ဆောင်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်။ အနီးကပ်စိတ်ခံစားမှုဆက်သွယ်မှု၏အောက်ပိုင်းနှုန်းထားများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် စှဲမွဲမှု နှင့် စိတ်ကျရောဂါ။ သူတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိမိတို့အသိကျားကန်ခြင်းနှင့်စာနာမှုနှင့်လူမှုရေးဖြစ်နိုင်သောအောင်, အအာရုံကြောပုံစံများနှင့်သူတို့အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသောသူတို့၏အမျိုးအဦးနှောက်ဓာတုဗေဒပြောင်းပေးပါ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၎င်း၏အလားအလာ ကျန်းမာရေး-ပေးခြင်းကို attachment, လိင်ဆက်ဆံထက်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုပြီးအကျိုးရှိသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ။ လိင်ဆက်ဆံမှုလွှတ်ပေး neurochemicals ကြောင်း ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများနေ့ရက်ကာလအဘို့ရစ်။ တကယ်တော့-နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲလိင်-မကြာခဏချစ်ခင်ခုနှစ်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်အလွန်ဖြစ်ပါသည် ပွော့နှင့် pair တစုံ-Bond မျိုးစိတ်အဘို့ကြိုး။ ဦး နှောက်ရဲ့ထိခိုက်လွယ်မှုကြောင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အပျော်အပါးတွေကိုမခံစားနိုင်တဲ့အခါ၊ ချစ်ခင်တွယ်တာမှုဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိ၊
ယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းမှ masturbating ရပ်တန့်သူကိုဝမ်းသာစရာရှိသူများ သိသိသာသာတိုးတက်မှုသတိထားမိ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ခြင်း၊ ပရောပရည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုရိပ်မိခြင်းနှင့်ရိပ်မိခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အလွန်အကျွံနှိုးဆွမှုရပ်တန့်သွားသောအခါဆုလာဘ်တိုက်နယ်သည်အခြားသူများအကြားဖော်ရွေသောအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုနှင့်စစ်မှန်သောအိမ်ထောင်ဖက်များ - ရှာဖွေတွေ့ရှိလာသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကို ထပ်မံ၍ အထိခိုက်မခံဖြစ်လာသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာပဲစွမ်းအင်တွေ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာတာ၊ တစ်လအကြာတွင်ထိုတွင်ရောက်ရန်ကြိုးစားမှုများစွာရှိခဲ့သော်လည်းထိုတိုးတက်မှုသည်ခေါင်မိုးမှတစ်ဆင့်ရှိခဲ့သည်။ လအနည်းငယ်အကြာမှာငါဟာစစ်မှန်တဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ထုတ်ဖော်ပြသသောအင်္ကျီသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး စီးဆင်းနေသောတောက်ပသောဆံပင်နှင့်ရနံ့ကဲ့သို့သေးငယ်သောအရာများကြောင့်နှိုးဆွခြင်းသည်ကောင်း၏။
Romeo နဲ့ Juliet အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းသည်ယောက်ျား၏သာမန်လိင်စိတ်နိုးကြားမှုနှင့်တကယ့်လူများအားစိတ်မ ၀ င်စားတော့သည့်အထိဖြစ်လာသည်။
အပြာသည်ယောက်ျားကိုအဓိကထားသည်၊ ကျွန်ုပ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကို porn အကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်၏တုံ့ပြန်မှုမှာ“ သူမဘယ်လိုသိသလဲ။ ” သူမသည်သူမအကြောင်းပြောနေတာဘာကိုမသိခဲ့ပါလျှင်နှင့်ညစ်ညမ်းသူမ၏ထံမှဘာမှယူမပြုခဲ့ကြောင်းကဲ့သို့၎င်း, တ ဦး တည်းနည်းနည်း cheat နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းပစ္စယ။
ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဘီးနဲ့တူတယ်ဆိုတာသိလာရပြီ။ ၎င်းသည်အလွန်အမင်းရောက်ရှိလာသည့်အခါ၎င်းသည်သူတို့၏လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုအမျိုးသားများမည်သို့ထိန်းညှိသည်စဖြစ်လာသည်၊ ၎င်းသည်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသောစိတ်ကူးယဉ်မှုများအဖြစ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားသောပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုလက်ချောင်းထိပ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကသင့်ကိုသာမန်လိင်မှုဘ ၀ မှကင်းဝေးစေပါတယ်။ မသိစိတ်ကညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာပုံမှန်နေ့စဉ်အခြေအနေမျိုးမှာကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့တူညီတဲ့တိုက်တွန်းမှုမျိုးမရှိပါဘူး။
ဒါဟာအရာဝတ္ထုတွေကိုအခမဲ့၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အမြောက်အများရရှိနိုင်တဲ့အချိန်မှာသာမန်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဘာဖြစ်လို့သွားရတာလဲ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့လိင်မှုကိစ္စဟာမင်းကိုမိန်းမတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့၊ သူတို့နဲ့ဆက်ဆံဖို့၊ သူမလိုအပ်တာတွေနဲ့အရာရာကိုပုံမှန်အတိုင်းတုန့်ပြန်ဖို့အတွက်သင့်ကိုတွန်းအားပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်၊ porn ကသင့်ကိုသူထင်မြင်ချက်ပေးသည်၊ သူမကငါနဲ့အခုလိင်မဆက်ဆံဘူးဆိုရင်၊ အမြဲတမ်း porntube သွားပြီးငါလိုချင်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေရနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူမငရဲကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုဟာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့နှစ်မျိုးစလုံးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျေနပ်စရာကောင်းတာကဘယ်တော့မှကျေနပ်စရာမရှိဘူး၊ တကယ့်အရာ၊ မတရားမှုရှိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကမိန်းမတွေကိုကြည့်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်။
ပြီးတော့ porn အကြောင်းအဆိုးဆုံးကတော့သင်ကလုံးဝကျေနပ်စရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုသင်သိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကတကယ့်သဘောတူညီချက်မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်မင်းတို့မှာကျန်းမာတဲ့လိင်ဘဝမရှိတာဘာကြောင့်လဲ၊ မင်းတို့ဘာလို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပုံမှန်တွေ့ဆုံခြင်းမပြုတာလဲ၊ ဘာကြောင့်အထီးကျန်ဖြစ်နေရတာလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ကညစ်ညမ်းတယ်ဆိုတဲ့ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့လို့ထင်နေလို့ပါ။ ဒါကမင်းကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုတာပဲ ဒါပေမယ့်ဒါကမင်းရဲ့လိင်စိတ်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးစိတ်ကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်တာပါပဲ။
တစ်ဦး pornfree ချည်ထံမှ
ဤနေရာတွင်လူအများစုက“ သူနှင့်အတူပြိုကွဲ” သွားကြလိမ့်မည်ထင်သည်။ သို့သော်သင်ထင်သည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်အခြားအကြံဥာဏ်များအတွက်ဒီကိုလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျနော့်အမြင်ကတော့မင်းသူ့ကိုအခွင့်အရေးပေးသင့်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပညာကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး nofap ကိုလည်းကြာမြင့်စွာမသိခဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရ fapping ဟာဆက်ဆံရေးတစ်ခုလုံးကိုပျက်စီးစေနိုင်ပြီးကျွန်မပိုကောင်းတာကိုမသိခဲ့ပါ။ သင်နှင့်ရင်းနှီးမှုရှိခြင်းနှင့်အန in တရာယ်ရှိနေခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့နေဆဲဖြစ်သည့်အခါ၎င်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်နှင့်အတူရှိသူကိုချစ်နိုင်သော်လည်းသင်၏ရုပ်ရှင်သည်အခြားပူပြင်းသည့်မိန်းကလေးများအားလည်းသင်ရရှိကြောင်းသင်၏ ဦး နှောက်ကနားလည်သည်။ ဒါကပုံမှန်အတိုင်းပဲ၊ ဒါကြောင့်မင်းကတခြားမိန်းကလေးတွေကိုပဲသတင်းပို့ပါ။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုပင်စဉ်းစားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါ ၃ နှစ်တာကာလအတွင်းမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေကြုံခဲ့ရပြီး၊ ငါမသိရင် nofap ကိုသိရင်ငါထင်လိမ့်မယ်။ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးဆက်ဆံရေးအတွက်လိမ်လည်ခြင်းအဆုံးသတ်ကျနော်တို့ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း, ငါ့ ဦး နှောက်ကိုသွားအရာအားလုံးကိုနှင့်အတူတက်ရှုပ်ထွေးနှင့်လည်းပါဝင်ပတ်သက်အရက်သောက်တွေအများကြီးရှိ၏ သင်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအမြဲကြည့်နေစဉ်သင်၏အတွေးအားလုံးသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားပြီးရှင်းလင်းစွာတွေးတောရန်ခက်ခဲသည်။ ပေါက်ကွဲရန်အလွန်လွယ်ကူသည် နောက်ဆုံးမှာတော့သူမကိုအပြတ်ရှင်းလိုက်ရုံနဲ့မတွေးဘဲမနေနိုင်တော့ဘူး။ အခု ၃ နှစ်ကြာဆက်ဆံရေးသာမကကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းလည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ငါ့အတွက်၊ ငါ့အတွက်အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ဒီခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါငါ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအများကြီးပြောင်းလဲရတော့မယ်၊ nofap စတာဟာသူတို့ထဲကတစ်ယောက်ပါ။ ဒါ့အပြင်ကျန်းမာတဲ့အစာစားခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ ယခုအခါအထူးအခါသမယများ၌အရက်ကိုသာငါသောက်သည်။ ငါ nofap ဒီအရာအားလုံးအတွက်တကယ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်, ငါကြာမြင့်စွာမပါခဲ့ပေမယ့်။ ဒါပေမယ့် fapping ကိုရပ်တန့်ဖို့မခဲယဉ်းသလိုပဲ။ စီးကရက်ဘူးနဲ့မတူဘူး သင်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်သောအခါသင်ပြုလုပ်သည်၊ ၎င်းဖြစ်ပျက်သောအခါအခြားမကောင်းသောစွဲလမ်းမှုများကိုဖယ်ရှားရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ ငါသိသမျှအားလုံးသည်ယခုငါခံစားဖူးသမျှထက်ယခုပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်အဘယျသို့ငါအကြံပြုတစ်နည်းနည်းနဲ့ nofap အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြနဲ့သေချာသူသည်ဤရှုမြင်စေရန်ဖြစ်ပါသည် ကို TED ဟောပြောပွဲ။ ပြီးတော့သူ့ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲပေးပါ။ ငါဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာရှိစဉ်အခါငါဤအကြောင်းကိုသိလျှင်ငါ asshole ၏သလောက်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ငါသည်လည်းငါ၏အသောက်ကိုထိန်းချုပ်, ကျန်းမာစားခြင်းနှင့်အနည်းဆုံးငါ၏အချစ်ကြည်ရေးစောင့်ရှောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျချင်လျှင်သူ့ကိုငါ့မှတ်ချက်ကိုဖတ်ပါ။ သူသည်သင်နှင့်အတူရှိနေသေးလျှင်သူသည်ပြောင်းလဲလိုသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသူကမှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်မရှိပါ။ သင်ပြောင်းလဲလိုလျှင် nofap သည်စတင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သူ့ကိုသူလိုအပ်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုပေးပြီးသူသည်သူမည်သူဖြစ်လိုသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ် - လေ့လာမှုများ
ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှစွဲလမ်းနှင့်တင်းမာမှုလက္ခဏာတွေ? porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 60 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာအားလုံး)